अस्ट्रेलियामा कार्यक्रमका नाममा ओसारपसारको धन्दा! – Aarthik Samachar
अस्ट्रेलियामा कार्यक्रमका नाममा ओसारपसारको धन्दा!
विमानस्थलमा हप्तै पिच्छे नेपाली कलाकारको स्वागतमा गरिने यस्ता नाटक मन्चनले अन्य यात्रुलाई बाधा पुर्‍याए पण्डित प्रकाश ढोडारीले बताए।
‘कार्यक्रम भन्दा पनि विमानस्थलमा राखिएका बडेमानका होर्डिङ बोर्ड र माला तथा खादाको स्वागतले हाम्रो नेपालीपनको प्रतिष्ठालाई समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको छ,’ पण्डीत ढोडारीले गुनासो गरे।
केही कार्यक्रममले नेपालको परिचय र शोभा बढाएका पनि छन् तर केही कार्यक्रमले नाक काटेको पनि उदाहरण भेटिन्छन् सिड्नीमा।
सिड्नीका कानुन ब्यवसायी खिलेन्द्रराज तिम्सीनाले कार्यक्रमका नाममा गलत उद्धेस्य बोकेर बदनाम गराउनेलाई पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताउँछन्।
‘फिल्म देखाउने, सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्ने र अन्य बहानामा आर्थिक प्रलोभनमा परेर भिसा लाउनु सरासर बेइमानी हो। यस्तो हुँदा बास्तविक कलाकारले भोलिका दिनमा अस्ट्रेलिया आउन कठिन हुन्छ,’ तिम्सीनाले सेतोपाटीसँग भने।
टुरीस्ट भिसामा मानिस ल्याउने र विद्यार्थी बनाएर लिगलाइज् बनाउने काम धमाधम भइरहेको तिम्सीनाको दाबी छ।
अस्ट्रेलियन सरकारले दिएको सहुलियतलाई उपयोग गर्नु अलग बिषय भए पनि एउटा कार्यक्रमको नाममा ल्याएर अर्को उद्धेश्य पूर्ति गर्ने काम भने गलत भइरहेको उनले बताए।
प्रवासमा नेपालीपन झल्कने र माया टल्कने कार्यक्रम गर्नु खुसी र गर्वको विषय हो। तर, यसका नाममा मानवतस्करी र भिसा लगाउने काम हुनु भनेको बदमाशी र बेइमानी भएको राइट एन्ड एशोशीएटका निर्देशक बालचन्द्र भट्टराईले बताए।
‘कलाकार गहना हुन्, प्रवासको माया र मोहले यतिखेर नेपाली फिल्म र कलाकारले केही हदसम्म राहत पाएका छन्। तर, मेला र महोत्सवको खेलमा मानवतस्करी गरेर पैसा कमाउने झेल चल्ने हो भने भोलिका दिनमा साच्चीकै कलाकारका लागि अस्ट्रेलिया कठिन पनि बन्नसक्छ’, भट्टराईले भने।
यस्तो परिवेश बढ्दै गएको कार्यक्रम र घटदै गएको लोकप्रियतालाई ध्यानमा राखेर यतिबेला केही आयोजकको बदमाशी नियाल्नुपर्ने बेला आइसकेको डा भरत पौडेलले बताए।
‘हाम्रो सोच भनेको नेपालीजनको ध्यानमा राखेर प्रवासमा आयोजना हुने कार्यक्रमहरु हाम्राका लागि नभइ राम्राको लागि हुनुपर्छ भन्ने हो। एउटा कार्यक्रमका नाममा फरक उद्धेश्यका साथ भिसा लगाउने र मानिश भित्र्याउने खेल गरिन्छ भने त्यो सरासर गलत हो, यसले दुइ देश बिचको राम्रो सम्वन्धमा समेत असर पर्न सक्छ,’ उनले भने।